Ikhosi yeArcGIS 10-ukusuka ekuqaleni-iGeofumadas
Ikhaya/Ezahlukeneyo/Ikhosi yeArcGIS ye-10-ukusuka ekuqaleni
Ikhosi yeArcGIS ye-10-ukusuka ekuqaleni
Uyayithanda i-GIS, ke apha unokufunda i-ArcGIS 10 ukusuka ekuqaleni kwaye ufumane isatifikethi.
Le khosi i-100% elungiselelwe ngumdali "weblogi kaFranz", ukuba uye watyelela elo phepha uya kukwazi ukuba ukuba uya kufunda, ukuba akunjalo, yenze ngaphambi kokuba uqale.
Kubandakanya ukuzivocavoca kunye nencwadi: zokuqala ze-GIS.
Ngelixa uninzi lwayo lusebenza, inyathelo ngenyathelo. Ikwadibanisa icandelo lethiyori elivumela abafundi ukuba basekele ulwazi lwabo kwi-GIS, kuba ayenzelwanga ukuhambisa ukufunda ngoomatshini, kodwa kubanzi.
Uya kufunda ntoni
I-ArcGIS 10 ukusuka zero ukuya kwinqanaba eliphakathi.
Ukuqonda iikhonsepthi ezisisiseko ze-GIS.
Yenza kunye nokulawula iifayile.
Sebenzisa izixhobo ze-geoprocessing.
Ukubala ubume bejometri (indawo, umjikelezo, ubude, njl.njl).
Ulawulo nolawulo lweetafile.
Phuhlisa izakhono kuhlalutyo lwendawo.
Yazi izixhobo eziphambili zohlalutyo lomhlaba.
Faka iintlobo ezahlukeneyo zophawu.
Yazi ukutolikwa kunye nokusetyenziswa kwayo.
Yila iimephu ezilungele ukuprintwa.
Iingcamango ezisisiseko ze-cartography kunye nejodey.
Incwadi: Izixhobo ze-GIS (zifakiwe).
Ukuzivocavoca: Izixhobo ezisisiseko ze-GIS (ifakiwe).
I-ArcGIS 10 (ngesiNgesi) ifakwe kwikhompyuter yakho (Iyafuneka ngaphambi kokubhalisa).
Abathandi behlabathi be-GIS.
Iingcali kwezamahlathi, ezokusingqongileyo, ezoluntu, ezzejograjini, ubuchwephesha kwezokwakha, ucwangciso lwedolophu, ukhenketho, ezolimo, ibhayiloji kunye nabo bonke abo babandakanyekayo kwiNzululwazi yeHlabathi.
Abantu abafuna ukwazi amandla e-ArcGIS.
Abasebenzisi be "Blog yefranz".
Ikhosi ikwafumaneka ngeSpanish
Ikhosi ye-Geolocation ye-Android - usebenzisa i-html5 kunye neeMephu zikaGoogle
I-ESRI Venezuela kunye no-Edgar Díaz Villarroel weTwingeo 6th Edition
Izinzwa ezikude-6 ekhethekileyo. Ushicilelo lweTwinGeo
Amanqaku angama-25 eTekhnoloji